Faka isicelo se-blush - Ungakwenza kanjani ngokuya ngobuso bakho | Bezzia
USusana godoy | 15/09/2021 12:00 | Ubuhle
Uyazi ukuthi ungasifaka kanjani isicelo blush? Kubukeka sengathi kulula kakhulu futhi akusikhona ukuthi kufanele sizenze nzima ngokwethu, kepha kwesinye isikhathi uma singalandeli izinyathelo ezifanele, umphumela kungenzeka ungabi nawo. Ngakho-ke, yisikhathi sokwazi ukuthi kufanele senze kanjani ngokuya ngohlobo lobuso esinabo.
Njengoba esikufunayo njalo gqamisa amaphuzu ethu amahle kakhulu nezingxenye, ngakho-ke kulokhu sidinga izeluleko ezinhle kakhulu. Mhlawumbe ubucabanga ukuthi i-blush ayinayo isayensi enkulu uma isetshenziswa, kepha njengoba uzobona nayo inamaqhinga ayo amancane. Ngakho-ke, vumela ukuthi uthathwe yibo bonke futhi uzobona leyo miphumela emihle obuyilindele.
1 Ungasifaka kanjani isicelo blush ebusweni obuyisikwele
2 Ungasifaka kanjani isicelo blush ebusweni obusaqanda
3 Faka amahloni ebusweni obuyindilinga
4 Ngobuso obude kakhulu
5 Ubuso obunxantathu
Ungasifaka kanjani isicelo blush ebusweni obuyisikwele
Siqala ngobuso besikwele, okuyiwona onemihlathi emakwe kahle futhi emincane. Ngendlela efanayo, izihlathi zakho zizovelela impela futhi lokhu kusho ukuthi kufanele silandele uchungechunge lwezinyathelo ukuze sikwazi ukusebenzisa i-blush. Njengoba siyifuna, kungukunikeza isiphetho esimnandi ebusweni obizwa njengobulukhuni. Ngakho-ke, sizobheka isifuba futhi sizoqokomisa ingxenye yaso engenhla. Kuzoba lapho lapho sisebenzisa khona ukungaboni kahle kepha ngaso sonke isikhathi sibheke engxenyeni engaphandle. Yenza ukunyakaza okuyindilinga okuncane endaweni ukuze uhlanganise kahle futhi uzobona ukuthi lokho kuthinta kwentsha kwethulwa kanjani kumzuzwana nje.
Ungasifaka kanjani isicelo blush ebusweni obusaqanda
Futhi kungenye yobuso obujwayelekile futhi kulokhu, kufanele kuthiwe banengxenye yamathambo ebanzi kunendawo yesilevu ngisho nasebunzini. Ngakho-ke, lokhu kukusenza kucace kithi ukuthi vele izothuthukisa ama-cheekbones, ngakho-ke lokhu kuhlukahluka kusenza sizibuze ukuthi singabeka kanjani amahloni. Iqiniso ukuthi liyisinyathelo esilula futhi okusho ukuthi, Sizoyikhulisa indawo futhi sizoyibeka kuso sonke isihlathi, esikhundleni sengxenye yesifuba nje. Kepha yebo, kufiphele kahle futhi kunemibala ekhanyayo efana nepentshisi ehlala ingenye yezintandokazi ezinkulu. Zama ukwenza umbala usuke phakathi nendawo uye ezindaweni eziseduze.
Faka amahloni ebusweni obuyindilinga
Uma sikhuluma ngobuso obuyindilinga, sisho lezo ezinebanga elifanayo kakhulu ekuphakameni nasebubanzini, ngakho-ke izingxenye ze-angular ziyalahlwa kepha yebo, ama-cheekbones ngokuvamile abanzi kancane. Ngakho-ke ukusebenzisa i-blush ukusisiza ukugqamisa ubuhle bethu, kulula kakhulu. Kulokhu kungcono kakhulu yisebenzise ngaphansi kwethambo lesifuba sakho futhi uvikele ingxenye yezihlathi. Kungcono ukuthi ukwenze ngendlela enyukayo sengathi umbala uzofinyelela emathempelini. Ngoba kuyindlela yokwelula le ndawo.
Ngobuso obude kakhulu
Lolu hlobo lobuso lwenza isilevu sibe nesilinganiso esinde futhi esincanyana, esiba sivelele kakhulu. Kepha kuyiqiniso ukuthi ekunciphiseni i-cheekbones nayo iyagqama. Ngoba, Kuyinto elula ukwenza uhlobo lomugqa ovundlile osuka endaweni yekhala ucishe ufinyelele ezindlebeni. Ngoba kuyindlela yokwehlukanisa nalowo mfanekiso wobude lobu buso obunabo futhi ubufinyeze, noma ngabe kusezingeni lomphumela wokukhanya kuphela.
Imvamisa iwubuso obuncane lapho ibunzi lincane kodwa umhlathi ubanzi. Ngakho-ke, ukuze zilinganise kancane zonke lezi zindawo sizofaka ukungcola ngendlela efanele. Kulokhu sizokwenza uhlobo lomugqa engxenyeni engenhla yesifuba. Okuthile okwenzekile nobuso bohlobo lwesikwele. Kufanele njalo ulandele umugqa wemvelo wesifuba esishiwoyo. Manje awusenazo izaba zokugqamisa ubuso bakho!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Ungasifaka kanjani isicelo se-blush ngokobuso bakho
Izinzuzo ezinkulu ezinganeni zokuba nenja
Amathiphu okusinda nge-telecommuting